Côte d’Ivoire: Famoretana tan-Kerisetra an’Ireo Hetsika an-Dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2011 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, Ελληνικά, English
Taorian'ny fitsaharana kely, mifantoka amin'i Cote d'Ivoire indray izao ny sain'ireo mpampita vaovao manerantany. Tato anatin'ny dimy andro dia niaina herisetra mivaivay indray ny firenena, ary fihamafisan'ny resak'ireo Ivoariana mponin'ny aterineto .
Ny 19 Febroary 2011, “revolisiona” ampilaminana iray [fr], araka ny niantsoan'i Guillaume Soro azy- ilay praiminisitry ny Filoha Alassane Ouattara nankatoavin'izao tontolo izao – no nokarakaraina tamina toerana mafo samihafa teo amin'ny firenena. Milaza i Ouattara fa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2010 nanoloana an'i Laurent Gbagbo izay efa filoha hatramin'ny taona 2000, ary noho izay no nanambarany ny tenany ho filoha voafidim-bahoaka ho an'i Cote d'Ivoire.
Mpanao fihetsiketsehana maty
Voaporitra tan-kerisetra mafy tokoa ny hetsi-panoherana tany Abobo, distrika iray mpomba an'i Ouattara any Abidjan renivohitra ara-toekarena Ivoariana, nahitàna farafahakeliny olona 3 maty [fr].
Ity lahatsary manaraka ity dia mampiseho fiara mifono vy an'ny Iraky ny Firenena Mikambana ao Côte d'Ivoire (UNOCI) miaro ireo mpanohana an'i Ouattara manao hetsi-panoherana an'i Gbagbo:
Tchélé Kobres dia nandrakitra sy nampakatra ity lahatsary manaraka ity tao amin'ny vondrona Facebook ‘Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire‘ [fr]; ilay vondrona izay misora-tena ho sehatra ho an'ny daholobe hfifanakalozan-dresaka malalaka momba ny fivoarana ara-demaokratika ao Côte d'Ivoire ary manana mpikambana maherin'ny 2.000.
Ilay lahatsary dia mampiseho lehilahy iray miakanjo matroka mitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana mitondra tanam-polo tamin'ny Sabotsy 19 Febroary 2011:
Ny 21 Febroary 2011, andro izay nampitovian'i Guillame Soro ny hetsika ho toy ny “Revolisiona amin'ny fomba Ejiptiana” , fito no olona [fr] nambara fa maty tamin'ireo mpanohana an'i Ouattara.
Nizara lahatsary nahitàna ireo mpanao fihetsiketsehana namoy ny ainy ireo Ivoriana mponin'ny aterineto. Ity lahatsary ity (TANDREMO: NY SARY ) nalefan'i mdosso4002 tao amin'ny Youtube, dia mampiseho ny vatana mangatsiakan'ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba an'i Ouattara maty tany Koumassi, Abidjan, noho ny tifitra bala afomanga nataon'ny Herim-Piarovana avy amin'ny tarika Gbagbo – Force of Defense and Security (FDS).
Mitondra fanamarihana ilay olona nandrakitra ny lahatsary:
Tsy miraraka amin-tsy antony ny rà ry Gbagbo
Ny tenifototra #civ2010 ao amin'ny Twitter dia nanjary vao maika nihamafy fototra nanaraka ny onjan'ny fihetsiketsehana, miaraka amin'ireo bitsika niova ho somary maherihery setra kokoa:
Koudou [Laurent Gbagbo] sy ny atin'akanjo masisony, Simone [Gbagbo] sy ny string XXL malaniny dia haboridana sy hatao an-keriny
Ny sasany amin'ny mpampiasa Twitter dia miezaka mampitony ny toe-draharaha:
Ny fahana #civ2010 ihany koa dia tandindon'ny Côte d'Ivoire eo amin'ny aterineto. Manala-baraka an'ireo izay nampiasa azy ny teny ratsy sy ompa.
Mpampiasa Twitter iray hafa no mandrisika ny olona monina ao Abobo, disrtrika iray mpomba an'i Ouattara ao Abidjan, mba hanohy ny tolona:
‘Ndao ry Abobo! tsy mbola tapitra akory ny ady.
Honohono tsy mbola voamarina no miteny fa manomana ady anaty akata hanoherana ny FDS ireo mpomba an'i Ouattara monina ao Abobo:
Fanamafisana avy amina olona ao an-toerana: raha kely indrindra dia fatinà FDS 40 no eto. Vatana tsy misy lohany!
Mandritra izany, ny tenifototra #civ2010 dia mitana ny lohany amin'ireo lohahevitra ho an'ny Twitter any Frantsa, araka ny nambaran'ny Twirus: